ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ကိုရီးယားက ဘုန်းကြီးစာသင်သား (၃) ~ pyidawoo
9:08 AM Pyidawoo No comments
...10년 9월 11일 23시 17분 52초
၉လပိုင်း ၁ရက်နေ.ကစလို. ကျောင်းပြန်ဖွင့်တယ် ဆိုကတည်းက စာပိသွားတာ စာရေးဖို. ဘလော့ဂ်ဘက်ကို မလှည့်နိူင်တော့ဘူး။ မဟာဝိဇ္ဖာ ပထမနှစ်ရဲ.ဒီ ဒုတိယပိုင်း စာသင်နှစ်ကနေစပြီး Early Childhood Education ကို မေဂျာအနေနဲ. ပြောင်း ယူဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျောင်းစတက်တုန်းက International & Area Studies မေဂျာနဲ. ကျောင်းဝင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ တရုတ်ကို အဓိက လေ့လာမယ် စိတ်ကူးပြီး ယူခဲ့ပေမယ့် ပထမနှစ်ဝက် တစ်လျှောက်လုံး E.C.E ကို မိုင်နာအနေနဲ. လုပ်ရင်းက စိတ်ဝင်စားလို. မေဂျာကို လုံးဝ ပြောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
...E.C.E အပါအဝင် ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ. မေဂျာတိုင်းဟာ ဒဿနိကဗေဒ၊ စိတ်ပညာနဲ. လူမှုရေးပညာ တွေကို အခြေခံတာမိုလို. ဘုန်းကြီးတွေ အင်မတန် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဒုတိယ စာသင်နှစ်ဝက်မှာ parent consouling နဲ. parent education ဆိုတဲ့ ဘာသာမျိုးတွေပါ ပါလာတော့ တော့တော့ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီဘာသာကို သင်တဲ့ ပါမောက္ခကိုပဲ ဘုန်းကြီးရဲ. ကျမ်းစာကို ကြီးကြပ်သူ စူပါဗွိုက်စာအဖြစ် ရွေးထားပါတယ်။ သူက ဘုန်းကြီးရဲ. ယောဂီလည်း ဖြစ်လို. တစ်ယောက်တလှည့် ဆရာလုပ်ကြရတာလို. ဆိုရမှာပေါ့လေ။
ဒီစာသင်နှစ်ဝက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စင်မ်စတာထက် ပိုပြီး ပင်ပန်းစရာဖြစ်လာပါတယ်။ နိူင်ငံခြားသား ကျောင်းသား တွေ TOPIK advance အဆင့် အောင်လက်မှတ် သော်လည်းကောင်း TOEFL သော် လည်း ကောင်း ရှိရမယ်။ မရှိရင် မဖြစ်မနေ ကိုရီးယားဘာသာ ၂ဘာသာယူရမယ်။ အနည်းဆုံး ဂရိတ်Bရမှ ကျမ်းရေးခွင့် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်အရ ကိုရီးယား ၂ဘာသာ ပိုယူလိုက်ရလို. တပတ်ကို ၅ရက် လုံးလုံး ကျောင်းတက်နေရပါတယ်။ တနင်္လာနဲ. သောကြာက ကိုရီယားစာ၊ ကျန်တဲ့ သုံးရက်ကတော့ မေဂျာဘာသာတွေပေါ့လေ။
အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ. စနေနေ. ည ၇နာရီကနေ ၉နာရီအထိ ကိုရီးယားယောဂီ တွေကို တရားဟောတရားပြ ကလည်း ရှိနေတယ်။ လစဉ် ဒုတိယ တနင်္ဂနွေ ဂွမ်ဂျူးနဲ. တတိယ တနင်္ဂနွေ ဖူဆန်း တရားပွဲ လုပ်တယ်။ ကြားထဲမှာ ဟိုကဒီက ပင့်တဲ့တရားပွဲ လေးတွေ လိုက်ဟောလိုက်သေးတယ် ဆိုတော့ တော့တော့ကို မြိုင်နေတာပေါ့။ မကြာခင် ၁၀လပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရနှင့် ဝိပဿနာ တရားတော် ဒုတိယအကြိမ် သင်တန်း စရတော့မယ်။ သင်တန်းသား စာရင်းတောင် ရောက်နေ ပါပြီ။ အလုပ်ချစ်သူအတွက် မောတော့မောတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မမောဘူး ဆိုပါစို.။ ခက်တာက ကျောင်းစာက မမောဘူးဆိုရုံနဲ. ပြီးတာမဟုတ်တော့ ဟန်သာ လုပ်နေ ရတယ် သိပ်တော့ မခံနိူင်လှဘူဗျား။
စိတ်မောစရာလေးတွေ အသာထား စာသင်နှစ်ဝက်အစမှာ ပထမဆုံး heart ထိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ဝေမျှ ချင်ပါတယ်။ ၂၁ရာစုအဝင်မှာ ကမ္ဘာ့ ပညာရေး ထိပ်တန်း နိူင်ငံတွေက “ပညာရေးနဲ. လူသားရင်းမြစ်ကို ဖွံ.ဖြိုးစေခြင်းသည်သာလျှင် နိူင်ငံရဲ. စီးပွားရေးတိုးတက်စေခြင်းရဲ. အဓိကအကြောင်းအရင်း ဖြစ်သည်” ဆိုတဲ့ အမြင်အပေါ် အာရုံစိုက်နေကြတယ်လို. ဆိုပါတယ်။ Highscope Perry Preschool သုတေသနရဲ. တွေ.ရှိချက်က အဆင့် အတန်းမြင့်တဲ့ မူကြိုကျောင်းမှာနေခဲ့ရ ပညာသင်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေဟာ ၁ဒေါ်လာရင်းရင် ၇.၁၆ဒေါ်လာ ရှာနိူင်တယ် ဆိုတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသုတေသနရလဒ်တွေကို အခြေခံပြီး ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ရှေ.ပြေး ဦးဆောင် ထိပ်တန်းနိူ်င်ငံတွေဟာ နိူင်ငံရဲ. စီးပွားရေးကို တိုးမြှင့်နိူင်ဖို. မူကြိုပညာရေးမှာ အထူးပိုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို. ပညာရေး စီမံကိန်းသစ် တွေ အပြိုင်အဆိုင်ဆွဲနေကြပါသတဲ့။
ဘုန်းကြီးတို. ရွှေမြန်မာတွေလည်း နေသာသလိုမနေကြဘဲ သေချာတဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ကလေး ပညာရေးမှာ နောက်မကျန်အောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်လှပါကြောင်း။